Ogaden News Agency (ONA) – Omot Obang Olom marka la barbardhigo Cabdi iley muxuu noqon !!
Omot Obang Olom marka la barbardhigo Cabdi iley muxuu noqon !!
Posted by ONA Admin	/ January 17, 2012
Sida ay ku sheegeen warsaxaafadeedka ay soo saareen ururka xuquuqda qawmiyadda Gambella u dooda ee aqoonyahanka lagu magacaabo Mr. Obang Metho uu madaxda ka yahay, ninkii gobolka Gambella uga wakiilka ahaa TPLF-ta Mr. Omot Obang Olom oo horey loo sheegay in laga qaaday masuuliyadii uu hayay ayaa dib hadana loogu soo celiyay. Ninkan ayaa lagu eedeeyay waxyaaba badan oy ka mid yihiin mususqmaasuq iyo inuu lacaga badan lunsaday oo raadkoodii la hayo. Gudigii loo soo xilsaaray baadhitaanka ayaa soo saaray go’aanka ah in laga qaado xilka madaxweynaha Gambela.
Hasa ahaatee si lama filaan ah ayaa dib loogu soo celiyay jagadii madaxweyne-nimada Omot Obang Olom, iyadoo la eryay ku xigeenkiisii iyo laba ka mid ah Gulaha Fulinta ee xisbiga talada gobolka ku magacaaban ee GPUDM.
Warbixinta bayaanka uu soo saaray ururkan u dooda xuquuqda Gambella-ha ayaa cadeeyay in Omot Olom oo madax ka ahaa Nabadgalyada Gobolka uu qayb ka ahaa gumaadkii lagu sameeyay shacabka Anuak 13kii Dec. 2003 kolkaasoo 424 qof oo shacabka Anwak ay laayeen ciidamada Itobiya. Waxay dadka gobolka ku eedeeyaan ninka M/Weynaha ka ah gobolka ee Omot Olom inuu isaga dhiibay magacyada dadkaa sida naxariisdarada ah loo laayay.
Qiimayntii guddiga ay ku sameeyeen Omoto oo lagu eedeeyay waxyaaba badan oy ka mid tahay inuu lunsaday lacag gaadhaysa 80 malyan oo lacagta Itobiya ah ayaa go’aansaday in xilka laga qaado. Hasa ahaatee Omot ayaa markuu ogaaday go’aanka ku soo socda si cadha ah uga jawaabay oo cod dheer ugu sheegay gudigii baadhayay in haddii ujeedada loo yimid ay tahay in isaga la xidho uusan kaligii galaynin xabsiga. Wuxuuna ku dhawaaqay cod la wada maqlayo; hadaan aniga bixiyay liiska dadkii la laayay, Meles ayuu ahaa ninka soo diray ciidanka iyo rasaasta lagu laayay dadka oo amrkana bixiyay. Dad fadhiyay goobta ayaa sheegay inuu yidhi; ” Hadaan u galayo xabsiga liiskaa aan dhiibay darteed, waa inuu ila gala xabsiga Meles oo ahaa ninkii amarka bixiyay.” (“If I end up going to jail for giving the list, I should go together with Meles who gave the order!”)
War-saxaafadeedka oo aad u dheer ood ka dheehan kartaan dhanka midigta ee qaybta Ingriisiga (Guji halkan), hadaan intaa ku dayno, Ogadenya ayaad moodaa inay arintanoo kale ka jirtay sanadkii la soo dhaafay oo aan weli soo afjarmin. Waxaa maqalnay dhowr jeer in la eryayo Cabdi iley oo qiimayn ay ku socoto. Muddo yar ka dibna waxaa soo baxasay in la eryo dadkii ku markhaati furayay.
Sidaan la socono Cabdi iley wuxuu ahaa hogaanka waxay uga yeedhaan Nabadgalyada intaan loo magacaabin jagada ay hadda fadhiyaan isaga iyo Omot Olom. Mudadaa uu ku magacawnaa nabadgalyada waxaa ka dhacay Ogadenya xasuuq aad u balaadhan oo ilaa maantadan aan joogno aan la ogayn boqolaal qof inay nool yihiin iyo in kale. Haddii Omot Olom loo haysto 424 qof oo la garanayo inuu dhiibay liiskooda oo la laayay, Cabdi iley waxaa ku maqan kumanaan qof oo shacab ah, oo qaarkood uu ku dilay gacantiisa, qaar kaloo badanna lagu toogtay miyiga sida ay sheegeen dhalinyarada uu ku qasbay inay laayaan shacabka ee ka soo tagay maxaysatada Hawaarin. Waxaa ilaa maantadan ku xareysan jeelasha Ogadenya ee ka dhisan gaar ahaan magaalooyinka waaweyna sida Jigjiga, Dhagaxbuur, Q/dahare, Godey, Wardheer iyo meel kaleba, kumanaan qof oo shacab ah oo da’walba leh. Shaki kuma jiro marka la qabsado Cabdi iley inuu isaguna odhan doono waxaa amarka lahaa Meles iyo ciidanka uu soo diray.
Dad xogogaal u ah arimaha hoose ee maamulka Addisababa ayaa sheegaya in Cabdi iley dhiiqada uu ku jiro ay la galeen qaar badan oo ka mid ah xisbiga taladada dalka haya ee TPLF/EPRDF sida Sheferow Tagla Mariam, Wasiirka Arimaha Federalka Itoobiya, Berket Simon oo ah Warfaafinta iyo saraakiisha sare ee ciidanka. Waxaa kaloo la hayaa caddaymo muujinaya in miisaaniyadda faraha badan ee lagu magacaabo in la siiyo maamulkiisa dib loogu celiyo inta badan qasnada haweeneyda Meles iyo laaluushka ay qaataan saraakiisha Wayaanaha ee isku badbadala Jigjiga say uga xoolaystaan. Sidaa darteed ayuu qofkasta oo ka horyimaada Cabdi iley ugu dambeeyaa in la dhaafiyo meesha oo ama la xidhaa ama lagu qasbaa inuu ka cararo dalka.
Waxay dadka xogogaalka u ah siyaasadaha Adisabab, in madaxda maamulada Kililada ay fahmeen hadda inay xukunka ku haysan karaan un hadday qasnada-hooda u furan qoyska Meles iyo saaxiibadii.